Archive du 20200602
Fahamaizan’ny Rova Nanao ampamoaka goavana i Serge Zafimahova
Anisan’ny tompon’andraikitra sy mpandrindra ny DGDIE tamin’ny andron’ny Filoha Zafy Albert ny tenako, saingy vitsy no nahalala izany, hoy Atoa Serge Zafimahova.
Bodo mpihira Sary hosodoko 15 no arantiny
30 taona mahery izay no nanehoan’i Bodo ny talentany tao anatin’ny hira sy mozika. Amin’izao kosa dia mampahafantatra talenta hafa eny amin’ny botika Paper Stor Akoor Digue i Bodo.
Distrikan’Ambilobe Alan-drongony 50ha no saron’ny zandary
Mitohy ny ady amin'ny fambolena sy fivarotana ary fifohana zava-mahadomelina "Jamala".
Fandriana Nahitana fatin-dehilahy mihosin-dra
Nahitana fatin-dehilahy mihosin-dra vao maraim-be tao amin’ny tsena Ambatonandriana Fandriana ny afak’omaly alahadin’ny pentekosta 31 mey. Teo akaikin'ny tranobe no nahitana izany.